Madaxweynaha Jabuuti oo Maanta Muqdisho tagay boodayna goobaha Barkaacayaasha – SBC
Madaxweynaha Jabuuti oo Maanta Muqdisho tagay boodayna goobaha Barkaacayaasha
Madaxweynaha Dowlada Djibouti ayaa Maanta ka degay garoonka diyaaradaha aadan Cade Airport ee magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya .
Madaxweynaha Dowlada Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo Wafdi uu horkacayo ayaa markii ay ka soo degeen Garoonka diyaaradaha Muqdisho waxa ay booqosho kala duwan ku tageen goobaha ay ku jiraan dadka Soomaaliyed ee Macluushu heysato.
Madaxweynaah Jamhuuriyada Jabuuti ayaa sheegay in dadkaasi xaaladoodu ay tahay mid aad iyo aad u liidata islamarkaana markii uu arkay uu siweyn uga calool xumaaday xaalada ay ku suganyihiin.
Waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in loo sheegay in dadkani ay iminka dhaamaan sidii ay ahaayeen Maalmo ka hor, taasina ay tahay mid uu aad uga xunyahay .
Waxa uu sheegay in dadka Tabaaleysani aysan waxba ka hagraneyn xiliga ay maanta booqashada ugu yimaadeena ay u sidaan Deeq dawooyin ah, isagoo intaasi raaciyay in dawooyinka ay yihiin kuwo aan intaasi ku ekeyn ee ay tahay intani intii ay diyaaradu u qaadi kareysay.
Waxa uu safaro ku maray Madaxweynaha Jabuuti sidoo kale goobaha caafimaad ee Muqdisho sida isbitalka banaadir halkaas oo uu kula kulmay dadka ku jira halkaasi oo ka mid ah dadka ay soo riteen macluusha ba’an ee taagan.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha Jabuuri Ismaaciil Cumar Geele oo la hadlayay Qalabka warbaahinta ayaa ugu baaqay beesha Caalamka in ay wadaan gurmadka dadka macluushu heyso loogu gargaarayo .